Akekho Oyikhathalelayo Ibhulogi Yakho! | Martech Zone
Akekho Oyikhathalelayo Ibhulogi Yakho!
NgoLwesithathu, ngoMashi 14, 2007 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
Nsuku zonke ngithola okungenani ukubamba okukodwa mayelana nebhulogi yami. Angiphatheki kabi. Ngicabanga kimi, "kuyinto ye-blogger, ubungeke uyiqonde".
Iqiniso ukuthi ngibahlonipha kakhulu ama-blogger kunami okungewona ama-blogger. (Ngicela uqaphele ukuthi ngithe inhlonipho 'enkulu'. Angishongo ukuthi angibahloniphi abantu abangewona ama-blogger.)
Ama-Blogger abelana ngolwazi ngokukhululeka.
Ama-Blogger aphonsela inselelo ukucabanga okuvamile.
Ama-Blogger afuna ulwazi.
Ama-Blogger anesibindi, azivulela ukugxekwa okukhulu futhi okusheshayo.
Ama-Blogger axhumanisa abantu abaswele nalabo abanesisombululo.
Ama-Blogger aphishekela iqiniso ngolaka.
Ama-Blogger ayazikhathalela izithameli zawo.
Ngakho-ke, ungangihleka futhi uhleke nebhulogi yami. Ngithanda umsebenzi wami wokumaketha nobuchwepheshe futhi ngiyakuthanda ukubhuloga ngakho konke engikufundile. Nginokufuna okungacimeki kolwazi nothando lapho ngithola noma ngidlulisa leyo ngcosana yolwazi exazulula inkinga yomuntu.
Ngikhathazekile ngabantu abangabuthandi ubuciko babo. Ngokushesha lapho u-5PM eshaya, laba bantu bamane bayashuna, bacime bagoduke. Umhlaba uyashintsha kubo, ukuncintisana kuyaqhubeka, ubuchwepheshe obusha buvulelwa umhlaba kepha abanantshisekelo. Bagoduke kube sengathi bemba umgodi phansi bese omunye ethatha ifosholo labo. Ungakulimaza kanjani ilukuluku nobuciko njengokushintsha kwesibani?
Ukuphathwa, ubuholi, ukuthuthukiswa, ihluzo, i-interface yomsebenzisi design, usability, ukumaketha - lena yonke imisebenzi edinga ukufunda ukwakha impumelelo. Uma ungathandi umsebenzi wakho wezandla noma imboni yakho, awunawo umsebenzi - unomsebenzi nje. Angifuni ukusebenza nabantu abanomsebenzi. Ngifuna ukusebenza nabantu abafuna ukushintsha umhlaba.
Ngibonile ukuthi abaholi abathanda ukuhola nabo bahola eSontweni labo, emakhaya abo, nasemindenini yabo. Onjiniyela abathanda ubuciko babo bathuthukisa izixazululo ngesikhathi sabo sokuphumula. Abadwebi bezithombe bakha amawebhusayithi amahle futhi benza umsebenzi wokuzimela. Abaqambi be-interface yomsebenzisi bazama izinhlelo zokusebenza futhi bafunda okushicilelwe kwakamuva. Ochwepheshe bokusebenziseka bahlala befunda futhi bebheka okutholwe yisayensi yakamuva. Abathengisi bavame ukusiza abangane babo ngamabhizinisi abo. Akuwona umsebenzi wanoma yimuphi walaba bantu, uthando lwabo nempilo yabo.
Lokho akusho ukuthi kususa umndeni noma injabulo. Laba bantu banakho konke abakufunayo futhi bajabule ngezimpilo zabo. Njengoba ngifunda amabhulogi, ngiyabona ukuthanda abantu abafaka ama-blogger kubuciko babo futhi ngiyabahlonipha. Ngingavuma! Kepha ngiyabahlonipha.
Namuhla ngithole incwadi evela ku Maka iCuban ngokuphendula umbono engiwubeke kubhulogi yakhe. Kwakumfushane - impendulo eqinile ekuphawuleni engikuthumele kusayithi lakhe. Ngiyakuzonda ukuthanda lo mfana, kepha angikwazi ukususa amehlo ami kokuthunyelwe kwakhe. Unolaka, ubuthuntu, futhi mhlawumbe angivumelani nakho konke akushoyo. Kepha ngiyaluthanda uthando lwakhe futhi ngicabanga ukuthi kungamangalisa ukusebenza nomuntu onjalo.
Kulungile, ifilosofi eyanele… ake sikuqede lokhu ngenothi elijabulisayo. Ukube bengizokwakha isikibha, yilokhu obekungabukeka kanjena:
Tags: ama-bloggeribhulogiakekho onendabaakekho onendaba nebhulogi yakho
Izisetshenziswa Ezingcono Kakhulu Zokuqhakambisa Amasu Wakho Wokubloga Wenkampani
Mar 14, 2007 ku-10: 39 PM
Kushiwo kahle. Ngiphakathi kokuqoqa izicelo zokuvula umsebenzi futhi ngithole ukuthi omunye wemibuzo yokuqala ebengiyibuza ukuthi, "ngabe lo muntu unebhulogi noma iwebhusayithi?" Labo abakwenzayo nabakhombisa uhlobo oluthile lwentshiseko ngalokho abakwenzayo bame ngaphezu kwalabo abangenabo ubukhona bewebhu.
Kepha-ke, ngikhetha kakhulu very
Mar 14, 2007 ku-11: 01 PM
Yize abanye abantu bengeke baqonde, kungaba yinto ehlekisayo uma ihembe lisithi: -I-Apple Logo here- + Blog! = Girlfriend. 🙂
Mar 15, 2007 ku-12: 47 PM
Mar 15, 2007 ku-9: 22 AM
Doug, ngiyayikhathalela ibhulogi yakho.
Mar 15, 2007 ku-9: 21 AM
Okuthunyelwe okuhle. Angikwazanga ukuvumelana kakhulu nakho konke okushilo. Manje ngidinga ukuyeka “umsebenzi” wami.
ISterling "Chip" Camden
Mar 15, 2007 ku-1: 36 PM
Ngiyayikhathalela nebhulogi yakho, futhi, uDoug.
Kwesinye isikhathi abantu ababonakala behlakaniphe ngenye indlela futhi bethanda kakhulu abakutholi ukubhuloga. Ngilinde ngesineke nje ukuthi babone ukukhanya.
Mar 15, 2007 ku-9: 19 PM
Siyabonga ngokukhuthaza abafana! Ngiyawathanda amabhulogi akho, futhi!
Mar 16, 2007 ku-2: 15 AM
NGITHEMBA ngempela ukuthi uzokwenza isikibha ngombono wakho (ungasebenzisa i-cafepress noma i-spreadshirt?).
Futhi ngenkathi ukuyo, sicela futhi inguqulo yesoka futhi!
Engingakusho ukuthi ubuhlakani obumsulwa!
I-blogger esizoba yisikhathi esigcwele maduzane, ihambisa konke okuqukethwe ku-wordpress…
Mar 16, 2007 ku-7: 08 AM
Inhlonipho enkulu 2 u. Ngifunde ibhulogi yakho, noma ngabe .. :-)
Mar 17, 2007 ku-7: 48 AM
UDoug, ngimusha emhlabeni webhulogi, kepha ngithole ukuxhumana okuningi futhi ngabelana ngokuvulekile ngesikhathi esifushane engimangazayo.
Ukuqaphela okuhle ngothando.
Mar 17, 2007 ku-9: 30 AM
Siyabonga ngamazwana futhi wamukelekile kubhulogi! It is a kumnandi, ubuchwepheshe obuvela. Angisakwazi ukulinda ukubona ukuthi kusithathaphi.